Maxaabiis Ku Muddo Dhaafay Xabsiga Dhexe Ee Hargaysa Oo Cunto Joojin Sameeyay | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Maxaabiis Ku Muddo Dhaafay Xabsiga Dhexe Ee Hargaysa Oo Cunto Joojin Sameeyay
Hargeysa (SDWO): Waxaa maalintii labaad cuntadda gabi ahaanba ka soomay sagaal maxbuus oo ku xidhan xabsiga weyn ee magaaladda Hargeysa.
Maxaabiistan cuntadda ka soomay ayaa eheladooddii noo xaqiijiyeen in ay ka gaddoodsan yihiin muddo dhaaf ay sheegeen in ay ku muddo dhaafeen xabsiga, iyaga oo dhammaystay xukunkooddii.
Maxaabiistan cuntadda ka soontay ayaa lagu soo waramayaa in ay ka go’antahay in ay sii waddaan cunto joojintoodda illaa ay ka heleyaan caddaalad deeqda, isla markaana ay dib u heleyaan xorriyaddooddii. Maxaabiistan ayaa shalay ku wargaliyay eheladooda oo xabsiga weyn ee magaaladda Hargeysa ku booqday in aan cunto danbe loo keenin oo ay cunto joojin go’aansadeen maalintii Sabtidii la soo dhaafay ee bishu ahayd 4-tii August 2018.
Eheladda maxaabiista ayaa noo sheegay in ay ka xun yihiin go’aanka cunto joojinta ah, isla markaana ay ka codsanayaan xukuumadda talada haysa iyo bahda garsoorka in caddaalad ay u ehelaan dadkoodda xidhan ee muddo dhaafay.
Maxaabiista ayaa baddankoodda loo soo xidhxidhay xiligii xukuumaddii Daahir Riyaale, iyaga oo loo haystay falal amni darro, isla markaana ay ku dhaceen xukunno maxkamaddo oo kala duwanaa; iyada oo maxkamadda sare ay xukunkii kama danbeysta ahaa uu madaxweyne Daahir Rayaale ka khafiifiyey.
Maxaabiistan oo tiro ahaan gaadhaya sagaal maxbuus oo dhamantood muddo dhaaf tirsanaya ayaa eheladdoodu noo sheegeen in ay kala quusteen caddaalad iyo garsoor xalaal ah, isla markaana ay in baddan u samrayeen in ay helaan xorriyaddooddii.
Eheladda maxaabiista ayaa tilmaamay in ay dhammaan waaxaha garsoorka illaa Maxkamadda sare u gudbiyeen kiisaskoodda, muddo sannado ahna ay ka daba wareegayeen in dadkoodaas ku xidhan muddo dhaafka ay dib u helaan xorriyaddooda isla markaana waxa ay intaas ku dareen in xitaa arrinkoodda ay gaadhsiiyeen xukuumaddii hore ee Siilaanyo.
Eheladdu waxa ay in baddan ku celceliyeen in maxkamadda sare markii uu Aadan Xaaji Cali yimid u ballan qaadday in ay heleyaan caddaalad rasmi ah, balse muddo kadib uu ku wargeliyey in kiiskoodda ay madaxtooyadda la tagaan oo arrinkani magdhow dowladda ahi ka iman karto haddii muddo dhaaf meesha yimaaddo.
Eheladdu waxa ay ugu baaqeen xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi iyo bahda garsoorka in caddaalad degdeg ah loo helo maxaabiistaas cunto joojinta sameysay, isla markaana waxa ay xukuumadda u sheegeen in haddii dadkoodu wax ku yeeloobaan ay iyagu mas’uuliyadda qaadayaan.
Waa kuwan maxaabiista iyo mid walba xiligii uu xukunkooddu dhammaaday.
Eng Axmed Cilmi Samatar, Cali Muuse Maxamuud, Daauud Saalax Iidle, Cali Maxamuud Cawale iyo Farxaan Cabdilaahi ayaa Dhammaan waxa lagu xukumay 15 sanno oo xadhig ah isla markaana waxa uu xadhigooddii dhammaaday 30/6/2014.
Cabdiraxmaan Maxamuud Jaamac iyo Cabdiraxmaan Cismaan Yuusuf ayaa lagu xakumay min 10 sanno oo xadhig ah, isla markaana xadhigooddu waxa uu dhammaaday 23/9/2012.
Jaamac Cabdi Ismaaciil iyo Maxamed Cali Ciise ayaa waxaa lagu xukumay min 20 sanno oo xadhig ah waxaana uu ka dhammaaday xukunkaas 30/6/2018.
Eheladduu waxa ay intaas ku dareen in balanqaadkii caddaaladda ahaa ee uu Madaxweynuhu ku ololeeyey ay uga fadhiyaan in ay fulliyaan.
Maxamed Saalax Iidle
Cabdilaahi Cilmi Samatar.